musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Etihad Airways yatanga ndege kuenda kuVienna, Austria
Airlines • nhandare yendege • Austria Kuputsa Nhau • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • UAE Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Iyo sevhisi nyowani yakatarwa nguva kusvika mangwanani-ngwanani muVienna kupa vafambi pakati peUAE neAustria mukana wakanaka wevhiki.
Etihad Airways inozivisa ndege nyowani dzeVienna muzhizha rino.
Iyo sevhisi ichashanda kaviri pasvondo uchishandisa Boeing 787 Dreamliner kubva 18 Chikunguru 2021.
Austria parizvino yakavhurika kune vagari venyika uye vagari veAustria uye vagari veSchengen-nhengo dzenyika, vafambi vebhizinesi uye vadzidzi.
Etihad Airways, iyo ndege yenyika yeUAE, ichatanga nendege kuenda kuVienna muzhizha rino. Iyo sevhisi ichashanda kaviri pasvondo uchishandisa Boeing 787 Dreamliner kubva 18 Chikunguru 2021.
Vafambi vanoshanyira Vienna vanonakidzwa nemazana emakore echinyakare tsika uye inonakidza nzvimbo. Guta guru reAustria rakagara rakavhoterwa guta rinogarika pasi rese.
Kurerutsa ruzivo rwekufamba uye nekupa runyararo rwepfungwa, Etihad Airways ichangobva kuvhurwa Verified to Fly, ichibvumira vashanyi kuti vape magwaro avo ekufambisa eCovid-19 vasati vasvika kuairport.
Vafambi vanoshandisa Verified to Fly vanogona kunakidzwa nekukurumidza track-kupinda kuairport nekuenda kune yakatsaurirwa Verified kuFly tafura kuti uwane nekukurumidza uye kutsetseka chiitiko.
Kubhururuka kuenda, kubva, uye kuburikidza neAud Dhabi kunotsigirwa nendege yakanyatsogadziriswazve uye chirongwa chekuchengetedza, Etihad Wellness, iyo inosimbisa iyo yakanyanya mwero yehutsanana inochengetwa pamatanho ese erwendo rwevatengi.
Etihad Airways ndiyo yechipiri mureza mutakuri weUnited Emirates. Hofisi yaro huru iri muKhalifa City, Abu Dhabi, padyo neAud Dhabi International Airport. Etihad yakatanga kushanda munaNovember 2003. Ndiyo yechipiri ndege huru muUAE mushure meEmirates.